तिथि मेरो पत्रु » एक पूरा सम्बन्ध कायम गर्न कसरी
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सेप्टेम्बर. 18 2020 |3मिनेट पढ्न
धेरै युगल पहिले नै थाहा: एक पूरा सम्बन्ध समय र ऊर्जा लगानी चाहिन्छ. केही यो कठिन बाटो सिकेका गर्दा, अरूलाई एक पहिलो सबै देखेर शान्ति हुनको बिना एक पूरा सम्बन्ध हुन सक्दैन भन्ने शुरुदेखि बुझे. तपाईं आफ्नो सम्बन्ध देख छन् र तपाईं लाग्छ भने तपाईं अब यो छ तरिका संग बिल्कुल खुसी छैनन्, तपाईं सुधार मा एक राम्रो लेखिन्छ यो आफैलाई छ भन्ने थाह हुनुपर्छ. स्व वृद्धि र व्यक्तिगत विकास आफ्नो आनन्द मात्र होइन चाबी हो, तर पनि एक दम्पतीको रूपमा एक सुखद र सन्तोषजनक जीवन गर्न. तपाईं दोस्रो विभाजित मा आफैलाई या आफ्नो सम्बन्ध परिवर्तन गर्न सक्दैन, तर यहाँ विचार गर्न केही बुँदाहरू छन्:
1. आनन्द भित्रबाट आउँछ
त्यो भने भइरहेको, तपाईं जीवनमा आफ्नो साथी गरेको एकमात्र लक्ष्य तपाईं बस्न र यसबारे केही गर्न जबकि तपाईं खुसी बनाउन होइन भन्ने थाह हुनुपर्छ. बस आफ्नो घरधनीले गर्न आनन्द अपेक्षा गरिएको बरु मूर्खता हो. एक पूरा सम्बन्ध प्रत्येक अन्य बारे आदर र हेरचाह गर्ने दुई मान्छे समावेश. प्रत्येक साथी सम्बन्ध केही लिन्छ, तर पनि यो मा केहि गर्छ. प्रेम अन्धो र बिना शर्त हुन सक्छ जबकि, यो निःस्वार्थ हुन छैन. त्यसैले, आशा छैन तपाईं खुसी बनाउन अन्य. आफैलाई मा लगानी; आफ्नो दम्पतीको आनन्द योगदान गर्न कसरी खुशी हुने सिक्न.
2. आफ्नो आँखा देखि बीम हटाउनुहोस्
एक पुरानो भनाइ पहिलो हाम्रो आफ्नै आँखा बाहिर काष्ठफलक लिन हामीलाई सिकाउँछ, हामी स्पष्ट र मात्र पछि देख्न कसैले अरू कसैको आँखा देखि धब्बा हटाउन सक्षम हुन चाहनुहुन्छ भने. यसको अर्थ के हो? ऐनामा आफैलाई मा पहिलो हेर, पत्ता लगाउन र आफ्नो साथी गरेको misshapes औंल्याएपछि अघि आफ्नो कमजोरी देखेर काम गर्न प्रयास. अन्य चरम मा गिरने र आत्म निन्दा लागि जा बिना, आफ्नो साथी केही सुस्त कटौती, एक आवर्धक गिलास उहाँको / उनको हरेक एक कदम हेरिरहेका रोक्न, र तिनीहरूलाई इन्साफ को सट्टा आफ्नो कामको बुझ्न प्रयास. तपाईं पनि थोडी दम्पतीले द्वन्द्व छ अर्को समय, बरु अरू कसैले दोष राख्न प्रयास, तपाईं गलत के आफैलाई सोध्नुहोस्. द्वन्द्व अलग तरिका पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुहोस्, र, जब यस्तो मतभेद उठ्छ, एक समाधान विचार शान्तिपूर्वक यसलाई हल गर्न.
3. आफ्नो शान्त रहनुहोस्
त्यसैले धेरै सम्बन्ध दुई साझेदार एक योद्धा मनोवृत्ति अपनाउने कारणले मात्र एक गलत मोड लियो. एक पूरा सम्बन्ध एक युद्धभूमिमा छैन. तपाईं आफ्नो साथी आक्रमण गर्न वा तपाईं आनन्दित महसुस मदत छैन एक उच्च स्कोर रूपमा आफ्नो जीत गणना गर्न आवश्यक छैन. बरु, आफ्नो शान्त राख्न प्रयास र आफ्नो साथी सहनशील हुन. आफ्नो साथी आफ्नो शत्रु होइन भनेर सोच्नुहोस्, र तपाईं आफ्नो आवाज उठाउने गर्न चाहनुहुन्छ जब, एक गहिरो सास लिन र आफैलाई गर्दैनन्. तपाईं चुपचाप माध्यम यो कुरा गर्न सक्षम छन् सम्म प्रतीक्षा, र तपाईं चाँडै परिणाम देख्नेछन्.
4. आफ्नो सम्बन्ध स्वस्थ जग राख्नु
एक ठोस घर ठोस जग मा बनाइयो छ जस्तै, एक पूरा सम्बन्ध स्वस्थ व्यक्तिहरूलाई मा बनाएको छ. यो तपाईं आफ्नो साथी को लागि इमानदार हुनुपर्छ अर्थ र, सबै भन्दा महत्वपूर्ण, आफैलाई शुरुदेखि. सँगै भविष्यमा योजना छन् भने किन तपाईं आफ्नो कमजोरी देखेर लुकाउन गर्न ठूलो त्याग जाने? अन्ततः आफ्नो कमजोर अंक सूचना गरिनेछ अन्य. के तपाईं कहिल्यै आफ्नो साथी तपाईंलाई दोषपूर्ण विचार कि तपाईं को भनेर पक्ष प्रेम वास्तवमा सक्छ भनेर सोचेको छ?
5. आफ्नो सपना परित्याग नगर्नुहोस्
तपाईं भन्नुभयो कसले एक पूरा सम्बन्ध छ र तपाईं आफ्नो सपना त्याग्नुपर्छ खुसी हुन? तपाईं विचार भने यो तपाईंको साथी गरेको इच्छा छ, दुई विकल्प छन्: या त तपाईं उहाँलाई मिल्यो / उनको गलत, वा यो एक छैन. न त स्वार्थ, न त selflessness एक सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध लागि सही मनोवृत्ति गठन. बरु, एक स्वस्थ प्रेम साझेदारी दुई समर्थन र आफ्नो सपना पछि लाग्न प्रत्येक अन्य प्रोत्साहन अर्थ. तपाईं आफ्नो इच्छा र लक्ष्य महत्त्वपूर्ण छैनन् भनेर निर्णय भने, तपाईं चाँडै निराश र विफल भएको महसुस गर्नेछन्. तपाईं आफ्नो सम्बन्ध शीर्षक गर्न चाहनुहुन्छ जहाँ यो छ?